Ozon OS: kugovera uko kunoda kupa hondo muna 2015 | Linux Vakapindwa muropa
Nitrux + Numix = Ozon OS, iyo Linux inovimbisa
Isaac | | Kugoverwa, Noticias
Ozon OS Inogona kunge iri 2015 hondo distro, kana saka zvinoita senge kubva kune yayo inonakidza dhizaini. Isu tatoona shanduko huru yemamwe maLinux kugoverwa, senge Deepin uye mamwe mapurojekiti anonakidza senge Evolve OS uye Elementary, asi Ozon OS kugovera uko kwakazvarwa kubva mukubatana kwemapurojekiti maviri aripo: Numix neNitrux.
Ngatiendei nezvikamu, Numix OS Izvo zvaiitirwa kuve distro iyo yaizotarisisa pamucherechedzo dhizaini uye gadziriso yemifananidzo yakajeka nemifananidzo yechinyakare yenzvimbo dzatajaira kuona. Mukutaura Numix akazvarwa semusoro wenyaya yeGNOME uye Kubatana kuti ape yakanyanya kunaka uye yemazuva ano chiono, asi yakashandurwa kuita yakazara distro. Asi yanga isipo zvakadaro, kunyangwe ivo vanogadzira vari kumashure kweNumix vakabatana neNitrux SA yeOzon.
Nitrox Izvo zvakafanana zvakafanana, kunyange hazvo uyu aona chiedza. A chitarisiko chitsva kuvandudza echinyakare graphical nharaunda uye kupa kutsva kutsva kutariswa kuLinux yedu. Asi pavanouya pamwe chete, zvinoguma nekugovera kutsva kunodaidzwa kunzi Ozon OS umo mapoka maviri ekuvandudza anosangana.
Sekureva kwevagadziri vayo, kunze kwechinyakare uye chidiki dhizaini, Ozon OS ichagadziriswazve kutamba. Asi panguva ino isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu, nekuti parizvino isu tine chete iyo Alfa vhezheni yakaburitswa zvichibva pa Fedora 20 uye pamwe munguva pfupi tichaona iyo Beta uye yekupedzisira vhezheni yakavakirwa paFedora 21.
Ozon OS inoshandisa nharaunda Atomu ShellSezvaunoziva, chaiyo seti nyowani yekuwedzeredzwa iyo inogona kuiswa pamusoro peGNOME Shell uye iyo ine yayo yega dock, pani uye app kuvhura. Uye isu tichaona izvo izvo optimizations ndezvevatambi izvo zvavanotaura nezvazvo (pamwe zvinouya nemifananidzo yemadhiraivha uye Steam). Nenzira, ivo zvakare vane icon theme, plymouth theme, wallpapers uye munguva pfupi iriwo yeGTK theme ...
Kana iwe uchifarira, iwe unogona kutevera iko kuvandudza kubva papeji re chirongwa paGitHub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Nitrux + Numix = Ozon OS, iyo Linux inovimbisa
Георги Кαрαβαсиʌеβ (@ me4oslav) akadaro
inoita 7 makore
Iwe wakatumira imwe isiriyo ruzivo nezve Ozon. Sezvazviri - Ozon HASI kuenderera kweNumix OS, nekuti pakanga pasati pave neNumix OS uye Atom-Shell isiri Gnome-Shell forogo. Ndokumbirawo ugadzirise:
Pindura kuna Георги Кαрαβαсиʌеβ (@ me4oslav)
Josep M Giribet akadaro
Kugadziriswa kubva kuOzon:
Tiri kurarama munyika umo kutepfenyurwa kwenhau uye mukurumbira zvichibva pakukosha zvakanyanya, saka zvinogara zvichinakidza kuona mablog mablog, maTweets, facebook zvinyorwa, google + zvinyorwa uye nezvimwe… nezve Ozon.
Nekudaro sa + Uri Herrera ataura, pane mabhii maviri asiri iwo eruzivo muchinyorwa chino:
A) Ozon haisi kuenderera kweNumix OS, nekuti Numix OS haina kumbobvira yavapo. Ozon chirongwa chekudyidzana chese ari maviri + Numix Project uye + Nitrux SA. Takataura izvozvo pane dzakawanda nguva.
B) Yedu desktop desktop - Atom-Shell haisi forogo yeGnome-Shell. Patakatanga kushanda pairi takaisa mutemo wekunzvenga fork kana zvichibvira, nekuti open source yatove balkanised zvakakwana uye hatidi kuve chikamu cheiyo balkanization kana tichigona kuzvidzivirira. Atom-Shell iri seti yeGnome-Shell yekuwedzera, kuti iwe ugone kuiisa pamusoro peGnome-Shell. Isu zvakare tine icon theme, plymouth theme, mapikicha uye isu tichava netariro yekuti tichava neGTK theme munguva pfupi zvakakwana.
"Tiri kurarama munyika umo kutepfenyurwa kwenhau uye mukurumbira zvakakosha zvakanyanya, ndosaka zvichikosha kuona zvinyorwa, tweets, Facebook, google-, nezvimwe. nezve Ozon.
Kunyangwe izvi, sekuratidzwa + naUri + Herrera, pane maviri akakanganisa ruzivo mune ino chinyorwa:
A) Ozon hakusi kuenderera kweNumixOS sezvo NumixOS isina kumbobvira yavapo. Ozon chirongwa chekubatana pakati pe + Numix i + Nitrux SA chirongwa. Izvo zvakataurwa kazhinji kazhinji kare.
B) Yedu desktop desktop - Atom-Shell haisi forogo yeGnome-Shell. Patakatanga kushanda pazviri, takazvimisikidza mutemo wekudzivirira maforogo zvakanyanya sezvinobvira nekuti Mahara Software yatove Balkanized uye tinoda kudzivirira kuzviita zvakanyanya sezvinobvira.
Atom-Shell iri seti yeGnome-Shell yekuwedzera, kuti iwe ugone kuiisa pamusoro peGnome-Shell. Isu zvakare tine icon theme, plymouth theme, mapikicha uye netariro iyo GTK theme munguva pfupi.
Pindura kuna Josep M Giribet
Isaac PE akadaro
Mhoro. Ndine urombo nekukanganisa. Yakagadziriswa kare. Ndinovimba zvese zvanaka izvozvi.
Pindura kuna Isaac PE
Kuumbwa: iwo makumi matatu nematatu akanakisa manyorerwo eLinux
Linux Lite: dzorerazve komputa yako yekare